I-Pedro Neto Childhood Indaba I-Untold Biography Amaqiniso
I-Eric Garcia Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
Ikhaya IZITOLO EZIZWELONKE ZOKWENZA IFOOTBALL Abadlali bebhola lebhola lesiNgisi I-Bukayo Saka Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso
I-LB inikeza iNdaba Ephelele Yebhola le-Football eliyaziwa kakhulu ngesiteketiso "USakinho“. Indaba yethu yeBukayo Saka Childhood Story Plus ye-Untold Biography ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela ngesikhathi sakhe sobuntwana kuze kube manje.
The Life and Rise of Bukayo Saka. Ikhredithi ku- Ilanga kanye neNettheroy
Ukuhlaziywa kuhilela impilo yakhe esemncane & isizinda somndeni, imfundo nokwakha amakhono, impilo yomsebenzi wasemncane, umgwaqo wakhe odabeni lodumo, ukukhuphuka ekudumeni kwendaba, ubudlelwano, impilo yomuntu siqu, amaqiniso omndeni nendlela yakhe yokuphila njll.
Yebo, wonke umuntu uyambona njengalowomuntu obukeka ebukeka enengane enamathemba amahle ebhola. Kodwa-ke, bambalwa kuphela ababheka i-Biography kaBukayo Saka ethakazelisa ngempela. Manje ngaphandle kokuqhubeka, ake siqale.
Ama-Bukayo Saka Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Imvelaphi Yokuphila Nokuqala Komndeni
UBukayo Saka wazalwa ngo Usuku lwe-5th lukaSepthemba 2001 kubazali baseNigeria edolobheni laseLondon, e-United Kingdom. Abazali bakhe bangabokufika baseNigeria okwathi ngaphambi kokuzalwa kwakhe basuka eNigeria bayohlala eLondon beyofuna impilo engcono namathuba amaningi ezingane zabo ezingakazalwa.
Ekuzalweni kwakhe, abazali bakhe baqanjwa “Bukayo"Okuyisibizo esingachazeki esisho ukuthi"Ingeza enjabulweni ”. Bukayo igama elisetshenziswa kaningi ngesizwe samaYoruba eningizimu ntshonalanga yeNigeria. Lokhu ngokusho ukuthi uBusayo Saka unomndeni wakhe odabuka esigabeni samaNoruba aseNigeria.
USokho ukhulele enhloko-dolobha yase-London iLondon esimeni semindeni esisezingeni eliphansi. Uyise nonina babefana nabaningi abafudukayo baseNigeria bengingenayo imfundo enhle kakhulu yezezimali kepha babenza imisebenzi ephansi futhi babevame ukuzabalaza ngemali ukuze banakekele izidingo zomndeni e-UK nase emuva eNigeria.
Ama-Bukayo Saka Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ezemfundo Nezokwakha Imisebenzi
Njengabaningi baseNigeria eLondon, amalungu omndeni kaBukayo Saka ayenentshisekelo ngebhola. Kwakuwuthando lwabo ngebhola nesifiso esingapheli sokukhulisa izinga labo lokuphila okuholele ekutheni kubhekwe ukuthi uBukayo abe nemfundo yebhola eLondon.
Habazali abathanda ibhola abathanda i-Arsenal ababexhasa i-Arsenal, kungokwemvelo ukuthi uBukayo osemncane agxile emqondweni wakhe ekwenzeni lokhu esikhungweni seqembu. Kwakungubaba kaBukayo Saka owathatha umthwalo omkhulu wokuqinisekisa ukuthi indodana yakhe ihlala isemhlabeni futhi ithobekile emzameni wakhe wokulungiselela ukuvivinywa okuphumelela kwezemfundo. Ngamazwi kaBukayo;
'Ubaba wami wayengigqugquzela kakhulu. Kusukela ngisemncane, ubelokhu engivikela '
Isicelo se-Arsenal football academy in satholakala kuphela sabafundi abanethalente ngempela. Ngenxa yokuthi abazali bakhe babazi ukuthi uBukayo unakho konke okudingekayo, abathandabuzi ukufaka isicelo. Ngijabule kakhulu i-Arsenal academy yabiza futhi yakufakazela ukuthi iyakufanelekela lokho, yadlula ezimweni zayo. Ngalesi sikhathi, ukuziqhenya kwabazali bakhe namalungu omndeni wakhe kwakungekho mingcele.
Ama-Bukayo Saka Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Okuqala Kwomsebenzi
USahle waqala umsebenzi wakhe Arsenal'Hale End academy' bekungelula kangako njengoba bekugcwele imihlatshelo eminingi evela kuye nabazali bakhe. Ngamazwi akhe;
"Kwakunzima kakhulu ukuthi abazali bami bangisize ngize lapha kodwa bahlala benikela ngakho konke futhi banginikeza ukuqeqeshwa"
Lo mzabalazo wanikeza uSaka izisusa eziningi ezamsiza ukuthi asebenze kanzima ngaso sonke isikhathi futhi aqiniseke ukuthi unikela ngokusemandleni akhe. Njengabalingani bakhe beqembu, uSokho wakhetha isithombe. Ngenkathi abanye behamba nabo Thierry Henry, Dennis Bergkamp, njll., wakhetha inganekwane yangaphambili yaseSweden ne-Arsenal, uFreddie Ljungberg obekade esengumqeqeshi wentsha kule kilabhu.
UFreddie Ljungberg wasiza uBukayo Saka ukuba abe yilokho ayikho namuhla. Isikweletu Sezithombe- Football365
Njengomdlali we-U15 academy player, uFreddie Ljungberg wanikeza uBukayo Saka ihlandla leseluleko esihle kakhulu. Wasiza uS Saka ukuhlala ethobekile futhi esebenza ngokuzikhandla njengoba ekholelwa ukuthi umfana omncane wayengeke abe umdlali ophezulu.
Ama-Bukayo Saka Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Umgwaqo oDumela Igama
Konke uFreddie Ljungberg akubikezela ngaye kwenzeka. Ngenkathi uSokho eguqula iminyaka eyi-17, wanikwa inkontileka yobuchwepheshe yi-Arsenal futhi wanyuselwa engxenyeni engaphansi kwe-23. Futhi, ngemuva kochungechunge lokudlala okumangazayo, uSaka wabizwa futhi eqenjini elikhulu lekilabhu.
Ngenkathi eqenjini eliphakeme, waqala ukubheka ithuba kumdlalo wokuncintisana wokuphazamisa umsebenzi wakhe futhi alwe nokuncintisana. Ekhuluma ngomncintiswano, ukududula u-Alex Iwobi kanye no Aaron Ramsey Kwakuyinselele enkulu ukwedlula eyakhe afunda nayo Reiss Nelson. Ukuguqulwa okulindelwe kakhulu kufike okokuqala kwi-2018 / 2019 Europa League Final lapho uShaka aqale washiya khona umaki ngokusebenza okuhle.
Ama-Bukayo Saka Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphakama Kumlando Wendaba
Ukuphela kwesizini ye-2018 / 2019 kukubonile zombili Aaron Ramsey futhi Alex Iwobi eshiya i-Arsenal yeJuve ne-Everton ngokulandelana. Lokhu kunikeze uBukayo igumbi ukuthi abe nomncintiswano omncane, kunomuntu oyedwa eqenjini lakhe ozokwazi ukuncintisana naye.
Ngo-19 Septhemba 2019 wabona uBukayo Saka enengxabano ekulweni phakathi kwakhe noReiss Nelson. Uthi bewazi?… Ngalo lolo suku, akazange afake amaphuzu kuphela, wanikela nabasizi ababili abathandekayo njengoba i-Arsenal yanqoba i-3-0 ibhekene no-Eintracht Frankfurt kumdlalo wabo wamaqembu wokuvula we-2019-20 UEFA Europa League. Ngezansi kwesiqeshana sobufakazi bevidiyo.
Lapho uBukayo Saka egcwalisa iphupho lakhe lobuntwana lokushaya igoli lakhe lokuqala e-Arsenal, wanikeza ubaba wakhe ucingo olusheshayo lweFaceTime. “Angikwazanga ukukhuluma naye ngoba abaqeqeshi babefuna ngingene ebhavini lokugezela ukuze ngilulame ngokushesha ngemuva komdlalo. Simane sibeke izithupha zethu komunye nomunye" Uthe.
Esikhundleni sokukhubeka ngokuqala okujwayelekile, i-winger engakwesobunxele yahamba ngamandla namandla. At Iminyaka ye-18 ne-125 Izinsuku ubudala, uShaka waba ngumqali omncane kunabo bonke abadlali abaphezulu e-Arsenal emlandweni wePremier League ukuqala ingxabano yeMan Utd vs Arsenal. Uphinde wamangaza abalandeli kulo mdlalo ngokususa izikhala Ashley Young.
Njengasesikhathini sokubhala, uBukayo Saka ubonwa ngabalandeli abaningi njengesithembiso esihle esilandelayo esizukulwaneni samaphiko sase-Arsenal ngemuva kukaFreddie Ljungberg. Bonke abanye, njengoba besho, manje umlando.
Ama-Bukayo Saka Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Ubudlelwano
Ngokuphumelela futhi ukhuphuka ezimfunweni ezinkulu zebhola lesiNgisi, kuyacaca ukuthi abalandeli abaningi kumele babuze ukuthi ngabe uBukayo Saka unentombi noma unkosikazi. Yebo! ubuso bakhe obuhle bezingane bubukeka buhambisana nesitayela sakhe sokudlala ngokuqinisekile bungamfaka phezulu kwesoka lamantombazane.
Imibuzo ebuzwa yintombi kaBukayo Saka. Ikhredithi ku- I-Sortitoutsi
Ngemuva kophenyo oluningi, kuvela ukuthi uBukayo Saka akashadile (ngesikhathi sokubhala). Siyazi ukuthi ngenxa yesimo esingazange sithethelelwe sebhola lamaNgisi esihamba phambili, kufanele ukuthi uSaka wakhetha ukugxila emsebenzini wakhe kunokufuna intombi noma omunye umuntu abe ngumkakhe.
Okwamanje, singasho ukuthi uSokho wenze umzamo oqinile wokugwema noma yikuphi ukubukelwa phansi kwempilo yakhe yangasese. Leli qiniso lenza kube nzima kuma-blogger afana nathi ukuthola imininingwane ngempilo yakhe yothando nomlando wokuthandana. Noma kunjalo, kusenokwenzeka ukuthi kungenzeka abe nentombi kodwa akhethe ukungayenzi emphakathini, okungenani okwamanje.
Ama-Bukayo Saka Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Personal
Ukwazi amaqiniso kaBukayo Saka Personal Life kungakusiza ukuthi uthole isithombe esingcono sobuntu bakhe obuhlangene nezindaba zebhola.
Ama-Bukayo Saka Amaqiniso Wokuphila Komuntu. Isikweletu ku-Twitter
Ukuhlangana naye, uzokwazi ukuthi uBukayo Saka uyaphila futhi usebenzisa indlela esebenzayo yokuphila impilo ehlelekile. Futhi, ungumuntu onobungane kakhulu futhi ophansi emhlabeni ovulekela abalandeli kakhulu. Ngenkathi ekuqeqeshweni, unaka imininingwane emincane kakhulu futhi aqinisekise ukuthi akukho lutho olusalayo oluzokwenzeka.
Emuva eNigeria ngisho nase-United Kingdom, abangane bakaBukayo Saka kanye nabasemazweni bambona njengengcebo yezwe okumele ivikelwe ngazo zonke izindleko. Bona ividiyo engezansi.
Ama-Bukayo Saka Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Ukuphila Komndeni
UBukayo Saka uyaziqhenya ngobukhokho bakhe kanye nezimpande zaseNigeria ngezikhathi ezimnandi nezimbi. Njengoba okondla, uyajabula ukuthola indlela yomndeni wakhe eya ekuzimeleni ngokwezezimali FOOTBALL.
Bukayo Saka Amalungu omndeni nezihlobo; Umama wakhe, ubaba, abafowabo, odadewabo, umalume, umalume, njll., manje bathola izinzuzo zokuba nezabo emahhovisi ezindaba zebhola lesiNgisi. Okwamanje, aAmalungu omndeni wakhe nezihlobo zakhe banakho konke wenze ukukhetha okuhle ukuthi angafuni ukwamukelwa ngumphakathi yize kunezindlela eziningi zokuxhuma kwimidiya yezenhlalo.
Ama-Bukayo Saka Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - LifeStyle
Ukusebenziseka ekujuleni kwenhliziyo nenjabulo kuyo kuyimpilo emibili ehlukene kaBukayo Saka ngokwendlela yakhe yokuphila. Yize ekholelwa ukwenza Imali ebholeni iyadingeka, kepha izizathu zakhe eziqinile zimsizile ukugcina imali yakhe ihlolile futhi ihlelekile.
Njengasikhathi sokubhala, uBukayo Saka akavumelekile ukuthi aphile impilo ebonakala kalula yisigceme sezimoto ezibizayo, izindlu njll.
UBukayo Saka Lifestyle- Ungukudambisa izidakamizwa ekuphileni okubizayo
Emhlabeni wanamuhla webhola lezimoto ezi-flash kanye nezikhala eziningi zemithombo yezokuxhumana ezibonisa ukuceba nezindlela zokuphila ezibizayo, singasho ukuthi uBukayo Saka uyindlela yokuqabula.
Ama-Bukayo Saka Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso - Amaqiniso angaziwa
Akuyena yedwa amaNigeria e-Academy: I-Arsenal FC Academy isheshe yaba ikhaya labadlali abaningi abavela eNigeria. Muva nje kusukela ngesikhathi sokubhala, le nhlangano yezemfundo inikele ngamathalente ezincwadi zokufunda kumakhono amane athembisayo anezimpande zaseNigeria - Ukusuka kwesobunxele uye kwesokudla kufaka u-Arthur Okonkwo, u-Armstrong Okoflex, uJames Olayinka noXavier Amaechi.
Amanye amaNigerian Stars e-Academy. Ikhredithi ku- Ilanga, I-BBC, i-ArsenalCore kanye Flickr
Inkolo: Njengoba kubonwe ngezansi, isihloko sakhe se-Instagram sifunda ukuthi “Ingane KaNkulunkulu"Futhi leli gama-ncazo lifana nelikaJoe Willock, asebenza naye. Kithina, kungenzeka ukuthi inkolo kaBukayo Saka ingubukristu.
Inkolo ka-Bukayo Saka-Chaziwe. Isikweletu ku-IG
QAPHELA QAPHELA: Siyabonga ngokufunda iBukayo Saka Childhood Indaba kanye ne-Untold Biography Amaqiniso. At LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma uthola into engabonakali kahle, sicela wabelane nathi ngokuphawula ngezansi. Sizohlala sibazisa futhi sihlonipha imibono yakho.
Jose Antonio Reyes Ingane Yendaba Indaba Engakaze Yayibi Biography Facts
Usuku olushintshiwe: Septhemba 10, 2020
Usuku olushintshiwe: Septhemba 9, 2020
I-Dennis Bergkamp Ingane Yomlando Plus Untold Biography Facts
I-Cesc Fabregas Ingane Yendaba Yomntwana Plus Untold Biography Facts
U-Emmanuel Adebayor Ingane Yendaba Indaba Plus Untold Biography Facts
Usuku olushintshiwe: Mashi 6, 2019